Khudbadihii uu jeediyay Raila Odinga inta uu booqashada ku joogay galbeedka dalka oo siyaabo kala duban looga hadlayo – The Voice of Northeastern Kenya
Khudbadihii uu jeediyay Raila Odinga inta uu booqashada ku joogay galbeedka dalka oo siyaabo kala duban looga hadlayo
Star FM July 27, 2016
Waxaa siyaabo kala duban looga hadlaaya khudbadihii u jeediyay hoggaamiyaha mucaaradka ugu weyn ee Cord Raila odinga intii uu boqashada ku joogay galbeedka dalka isbuuci la soo dhaafay.
Hoggaamiyaasha kasoo jeeda gobolkaasi gaar ahaan siyaasiyiinti goor dhow isaga baxay xisbiga ODM oo uu hogaamiyo Odinga ayaa si adag oga hadlay qaar kamid ah hadaladii Mas’uulkaasi u jeediyay .
Ababu namwamba oo kamid xildhibaanadii faarujiyay xilalkii ay ka hayeen ODM ayaa calaamatu su’aal galiyay sababaha Odinga uu u aflagaaday shacabka iyo qowmiyada halkaas ku dhaqan intii booqashadaasi uu ku gudajiray waa sida uu hadalka u dhigaye.
Hadaladii u jeedeiyay Mr odinga oo u Ababu Namwamba markii dambe ka hadlay ayaa waxaa kamid ahaa.
Eedeymahaasi iyadoo ay jiraan ayaa dhanka kale waxaa wali sii socdaa is qab qabqabsiga u dhaxeeya hoggaamiyaasha Cord oo mid walbo u doonayo in u noqdo musharaxa hoggaanka isbahaysiga Cord qaban doono si uu isugu soo sharaxo xilka ugu sareeyo doorashada fooda inagu soo hayso.
Moses Wetangula oo ah hoggaamiyaha Ford Kenya oo katirsan Cord oo hal maalin kadib markii Rai’sul wasaarihi hore ee dalka u soo gabagabeeyay booqashadiisa galbeedka dalka uu isagana booqasha ku tagay Countiga Busia ayaa ugu baaqay dadka ku dhaqan aagasi in ay gacan ka siiyan doorashada 2017-ka dalka ka dhaceyso.
Wali waxa si rasmi ah loo ogeyn qofka la isugu wada raaci doono in uu hoggaanka u qabto isbahaysiga Cord si uu ugu tartamo xilka madaxweynimo.
← Qoxooti la doonayay in dib loogu Celiyo Soomaliya oo dib u dhac kuyimid
Shan Scool oo uu dab ka kacay xalay oo talaada ahayd →
2 thoughts on “Khudbadihii uu jeediyay Raila Odinga inta uu booqashada ku joogay galbeedka dalka oo siyaabo kala duban looga hadlayo”
Msaid khalif Noor says:
Wa Sacid Khalif o joga mandera waxan dhihi laha kala qebsanantan dhextala hogamiyasha Cord waxan farxad utahay garabka hoganka jubilee marka siday hada hal hal ugu tala tagayan waxa so heri dona Raila kaligi marka waxan kula talin laha Mucaradku inay samahoda kataliyan mana habona waxay ku dhaqmayan manta
Cord saan ayey kudhaafeysa dorashadan sosocta